Ministirri Muummee Abiy Ahimad Yunaayitid Isteet daawwachuufi - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad Yunaayitid Isteet daawwachuufi
26 Adooleessa 2018
Goodayyaa suuraa Ministira Muummee Abiy Ahimad
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad hawaasa diyaaspooraa Ameerikaa Kaabaa jiraatan waliin mari'achuuf har'a garas imalu.
Imalli kunis 'Imala tokkoomuu' kan jedhame wayita tahu, mataduree 'Dallaa diiguun, Riqicha haa ijaarru' jedhuun taasifama.
Magaalota gurguddoo lammiileen Itoophiyaa keessa jiraatan Waashingitan DC, Loos Anjalas fi Minisootaas ni daawwatu.
Pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee kaaniis isaan waliin ni imalu.
Ministira muummeefi Feestivaala Ispoortii Daalaas
Hoggantuun Dhaabbata Oromo Advocacy Alliance jedhamuufi mirga namoomaa Oromoo falmu Aadde Seenaa Jimjimoo kana dura warri mootummaa Itoophiyaa hogganan yeroo as dhufan arrabsamaa, salphataafi reebamaa turan.
''Amma akkuma dhageenyu jijjiiramni dhufaa jiraa, namni keenya yeroo jalqabaaf sagalee Abiy fi pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaaa Magarsaa dhagahuuf dheebotee jira.''
Keessumaa jedhan Aadde Seenaan warri biyya alaa jirru jijjiirama dhugaa barbaannaa. Ammallee namootni du'aa jiru, namootni kana dura ummata dararaa turan seeratti dhiyaachuu akka qaban faa gaaffii dhiyeessina jedhan.
Dabalataanis, seera wixinee mootummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa taasisuun akka raggaasifamu gochuu isaanii himu.
Wixinee seeraa biraa gara bakka bu'oota ummata Ameerikaa hin ergin akkamittiin jijjiirama amma jiruu deeggaruu dandeenya isa jedhu irratti Ministira Muummee wajjiin marii gochuuf karoorsineerra jedhu.
Dura taa'aa hawaasa Oromoo Miinisootaa kan ta'an Obbo Tashitaa Waaqoos Ministirri Muummee gaaffii keenya dhagahanii Miinisootaa daawwachuuf dhufuu isaanitti baayyee gammannee jedhan.
Jijjiiramni isaan biyya keessatti isaan fidaa jiran fakkeenya akka ta'uuf simannaa isaaniif asitti qophiin xumuramee jira jedhu Obbo Tashitaan.
''Oromoo miiliyoona tokko tahu naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee jiruuf furmaanni kennamu maal akka tahe? Yeroon yeroo dhiifamati gaafa jennu dhiifama haqa irratti hundaa 'e tahuu waan qabuuf dargaggoota waggaa sadii keessatti dhumachuun maaliif akka tahe gara fuulduraa akka irra hin deebi'amne waan godhamuu,'' gaafanna jedhan.
Jijjiirama siyaasaa guyyoota 100 keessatti mul'atan
Yaaddoowwan bulchiinsa Dr. Abiyyitti gufuu ta'uu malan
Kana malees, guyyaa kibxataa marii Obbo Lammaa Magarsaa wajjiin adeemsifamuun dhalattoonni naannoo Oromiyaa akkamittiin diinagdee irratti qooda fudhachuun naannoosaanii guddisuu danda'u waan jedhu irratti marii'anna jedhaniiru.
Qindeessaa garee simannaa Magaalaa Waashingitan DC kan ta'e Solomoon Kaabtiimar immoo qophichi kan yeroo kamiyyuu ni caala akka hawwataa ta'u qophoofneerra jedhan.
Dabalataanis, sagantaa kanaaf namoonni Waashingitan qofa osoo hin taane isteetiiwwan biroodhaallee imalaa jiraachuu himaniiru.
''Biyya gosaafi sabaan qoodanii bulchuu kuni ni dhaabbata moo itti fufa?'' gaaffii jedhu dabalatee dhimma alaabaa ilaalchisee illee namootni waan hubannoo irratti argachuu barbaadan irratti yaada dhiyeessu jedheen yaada jedhu obbo Solomoon.
Dr. Abiy Feestivaalii Ispoortii Daalaasirraa hafuun hiikaa maalii qaba?